Tag: post mpịakọta | Martech Zone
Satọde, Febụwarị 2, 2019 Wednesday, February 6, 2019 Douglas Karr
Ka WordPress na-aga n'ihu ijide ahịa azụmaahịa, anyị na-aga n'ihu ịnweta ọtụtụ arịrịọ sitere na nnukwu ụlọ ọrụ ndị nwere saịtị mara mma nke ụlọ ọrụ na-emepụta ịtụnanya na ụlọ ọrụ ihe osise - mana enweghị njikarịcha dị mkpa iji metụta nsonaazụ ọchụchọ ha. Tupu anyị arụ ọrụ na atụmatụ dị iche iche maka ndị ahịa anyị, anyị na-amalite site n'inyere ha aka na njikarịcha. Enweghi oke ojiji maka itinye ego na ọdịnaya kachasị ma ọ bụrụ na ahụghị saịtị gị!
Wzọ iri abụọ ị ga-eji nweta afọ ojuju afọ gị karịa asọmpi gị
Ọ na-eju m anya ole ụlọ ọrụ na-arụsi ọrụ ike na-etinye n'ime atụmatụ ọdịnaya na-enweghị ele saịtị na ibe asọmpi anya. Anaghị m pụtara asọmpi azụmahịa, M pụtara organic asọmpi asọmpi. N'iji ngwá ọrụ dị kaSemrush, ụlọ ọrụ nwere ike ịme nyocha asọmpi n'etiti saịtị ha na saịtị asọmpi iji mata usoro okwu na-eme ka ndị na-asọmpi zụọ ahịa nke kwesịrị, kama, na-eduga na saịtị ha. Ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime gị nwere ike ịnọ na-eche
Otu esi ewepu ya Pesky -2 Issue na WordPress Slugs
Friday, February 6, 2015 Friday, February 6, 2015 Douglas Karr
Echere m na ọ bụghị naanị m na nke a na-enye nsogbu, mana m kpọrọ ya asị mgbe m gbakwunye otu edemede na WordPress blog na URL ahụ gbanwere n'ime ihe dịka / udi-2 /. Kedu ihe kpatara WordPress ji agbakwunye -2? Mkpado gị, edemede gị, ibe gị na posts gị niile nwere mpịakọta nke akọwapụtara n'otu tebụl ebe ị na - enweghị ike ịmepụtagharị ọ bụla n'etiti mpaghara atọ ahụ. Ihe na - emekarị bụ na inwere ibe akwụkwọ, biputere ma ọ bụ
Mgbanwe Post slugs na WordPress maka SEO
Wednesday, September 2, 2009 Wednesday, July 9, 2014 Douglas Karr
N'oge ụfọdụ mgbe ị na-eme nyocha isiokwu mgbe ị na-ede blọgụ maka njikarịcha njin ọchụchọ, ị nwere ike ịchọpụta na ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị na-achọ okwu na-ekwuhie ma ọ bụ mechie okwu. Otu ihe atụ nwere ike ịbụ USS Forrestal na USS Forestal. Igosipụta nsonaazụ ọchụchọ maka mkpụrụ okwu edepụtara edepụtara bụ ụzọ aghụghọ na-arụ ọrụ nke ọma… mana ị nwere ike ọ gaghị achọ ịkọhie ajọ okwu n'isi aha gị ma ọ bụ ọdịnaya gị. Mgbe nile, mmadụ ga-egosi ihie ụzọ